नेपालमा भूकम्पमा भन्दा तीन गुणा बढीको ज्यान लिने महाविपत्ति किन नरोक्ने?
बैशाख २८, २०७४ बिहिवार १३:२५:०० प्रकाशित
मलाई यो कुरा व्यक्त गर्दा निकै दुःख लाइरहेको छ। तर, यो यथार्थ हो। नेपालमा हरेक वर्ष २५ हजारभन्दा बढी मानिसले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेकै कारण अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो संख्या निकै ठूलो हो। एक वर्षमै यति धेरै नागरिकको ज्यान लिने यो महामारीलाई रोक्न सकिन्छ। यतातिर सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।
नेपालमा दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्प गयो। भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो। त्यसको पीडाबाट नेपालीहरु विस्तारै माथि उठिरहेका छन्। भूकम्पको त्यो क्षतिले समग्र विश्वमा गहिरो दुःख दिएको थियो। विश्वभर नेपालीको पीडामा मह्लम लगाउने आवाज उठे। त्यतिबेला ८ हजार नेपालीको ज्यान गएको थियो। वास्तवमै त्यो ठूलो विपत्ति थियो।
तर, भूकम्पको त्यो विपत्तिमा भन्दा तीन गुणा बढी मनिसलाई हरेक वर्ष चुँडेर लाने अर्को महाविपत्तिका विषयमा भने हामीले पर्याप्त कदम नै चाल्न सकेका छैनौँ। त्यो महाविपत्ति हो, धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थ। जसका कारण हरेक वर्ष २५ हजार बढी नेपालीको अकालमा ज्यान गइरहेको छ। हजारौँ नेपालीलाई ठूलो रोगतर्फ धकेलिरहेको छ। धूमपानकै कारण लाग्ने क्यान्सरजस्ता कडा रोगको उपचारमा लाग्ने खर्चले मानिसलाई गरिबीतिर धकेलिरहेको छ।
यो महाविपत्तिलाई हामी आफैँले रोक्न सक्नेछौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्दै अकाल मृत्युलाई रोक्न र क्यान्सरजस्ता कडा रोगबाट थलिएर गरिबीतर्फ धकेलिनुपर्ने बाध्यतालाई रोक्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा नेपाल अलि बढी संवेदनशील र चिन्तित हुनुपर्ने समय आइसकेको छ। नेपालले यो महाविपत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाएको छ। तर, उक्त कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने जानकारी आइरहेको छ। अब नेपालले नागरिकलाई स्वस्थ र हजारौँको ज्यान जोगाउन कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ जानै पर्छ।
चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई कम गर्दै लैजान कानुनमा भए अनुसार ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा यस्ता पदार्थको प्रयोग दरलाई कम गर्दै लैजान नेपालले करको दरमा बृद्धि गर्नुपर्छ। चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करलाई भारी मात्रामा वृद्धि गरेर नेपालले ठूलो राजस्व उठाउन सक्छ।
चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनु भनेको यस्ता पदार्थको सेवन दर घटाउनु हो। उक्त करबाट उठेको रकमबाट नेपालले क्यान्सरका बिरामी तथा स्वास्थ्यका अरु क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ। बिरामी भइसकेका नेपालीको उपचार गर्न र नयाँ पुस्तालाई सेवन गर्नबाट रोक्न पनि कर बढाउन आवश्यक छ।
दक्षिण एसियाली देशहरुमा हेर्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा नेपालले लगाएको कर निकै कम छ। जसरी नेपालले चित्रात्मक सन्देश राख्ने कानुन बनाएर विश्वमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ। त्यसैगरी, सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करमा समेत नेपालले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपाली नागरिकको जीवन बचाउन पनि नेपालले अब यस्ता उत्पादनमाथि अत्यधिक कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
(सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाली नेतृत्व तालिममा सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘द युनियन’को चाइना अफिसका निर्देशक डा. क्वानले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)